Pejy fandokoana raozy halefa sy aloko maimaim-poana
Pejy fandokoana mavo | raozy
Fikarakarana Rose ho an'ny vao manomboka
Fanaraha-maso peste biolojika sy karazany maro loko
Misy zavamaniry vitsivitsy ihany izay miseho amin'ny karazany maro karazana toy ny "mpanjakavavin'ny voninkazo", ny raozy. Ny karazana mahazatra indrindra amin'ny zaridaina an-trano dia kirihitra lehibe kokoa na kely kokoa izay mety hitombo hatramin'ny iray metatra ny haavony. Toa mitaky izany, fa ny fikolokoloana ny raozy dia tsy sarotra.
Pejy fandokoana raozy
Ny fandokoana voninkazo amin'ny loko mamirapiratra dia, INDRINDRA, tsy ho an'ny ankizy kely ihany. Ary mazava ho azy ny raozy, amin'ny maha mpanjakavavin'ny voninkazo azy, dia mendrika ny sokajy misy azy manokana. Ny fikitihana ny rohy dia manokatra ilay pejy miaraka amina modely fandokoana voafantina:
Mitsangàna miaraka amin'ny taho
Lokoy ny raozy
Raozy sy fo
Voucher misy raozy
Fo, raozy & sora-baventy
Ahitana felana rossa pejy
Misy fanavahana eto amin'ireo karazana misy felam-boninkazo toy ny panicle na umbel ary ireo izay tsy mamorona voninkazo iray monja amin'ny tifitra tsirairay. Izay variant sy loko inona no safidinao dia resaka tsiro. Zava-dehibe ny aleon'ny ankamaroan'ireo voninkazo tsara tarehy ireo toerana misy masoandro. Mihatra amin'ny raozy miakatra ihany koa io, izay ahafahanao mandravaka tsara ny rindrin'ny trano na ny trellis fotsiny.
Fikarakarana Rose - toro-hevitra amin'ny fikarakarana ny raozy
Ny lesoka momba ny fikolokoloana raozy
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro fa mitaky fikarakarana be ny raozy, dia tena mora karakaraina izy ireo. Mihatra farafaharatsiny izany ho an'ireo zaridaina fialam-boly maniry hankafy ireo voninkazo mahafinaritra sy ny fitomboany. Mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny mpamboly raozy.
Raha te hanana asa kely araka izay azo atao miaraka amin'ny "mpanjakavavin'ny voninkazo" ianao, dia tsara kokoa ny misafidy karazana mafy ho an'ny zaridainanao. Ny raozy dite hybrid tsara tarehy matetika dia mora tohina amin'ny fanala, izay tena marina amin'ny karazana anglisy.
Ny fararano dia vanim-potoana fambolena
Ny fotoana tsara indrindra hambolena raozy dia amin'ny fararano. Raha te hankafy ny voninkazoo ianao mandritra ny fotoana lava, dia tokony hividy izany avy amin'ny akanin-jaza voatendry, kokoa raha tsy misy vilany. Alohan'ny hametrahana azy ireo amin'ny tany dia tsy maintsy voaomana tsara ny tany. Zava-dehibe indrindra ny famahana ny tany ho ampy satria ny raozy dia mamorona faka lava.
Ity zava-misy ity dia hahasoa anao any aoriana satria tsy mila manondraka ireo zavamaniry matetika ianao na dia amin'ny fahavaratra main-tany aza. Tsy tokony hamboly raozy ianao amin'ny fararano. Ireo tifitra tanora izay mamorona avy eo dia afaka mangatsiaka amin'ny ririnina ary miteraka fahasimbana amin'ny zavamaniry. Aorian'ny fambolena dia ampy ny manangona kely ny tany ary manondraka azy tsara.
Koa satria efa akaiky ny ririnina dia mila miaro raozy mafy amin'ny fanala mahery koa ianao. Eto anefa dia ampy ny manarona ny tany manodidina ny vatan-kazo amin'ny mulch bark na sampana cemara, manodidina ny folo santimetatra ny haavony.
Ny fanetezam-boaloboka dia aorian'ny fe-potoana fanala
Ny zezika dia atao amin'ny lohataona. Ireo vokatra voajanahary izay tafiditra ao anaty tany manodidina ilay zavamaniry no tsara indrindra. Alohan'izany anefa dia mila ny fanetezana isan-taona ny raozy, fa rehefa vita ihany ny ririnina. Tsy maintsy atao ny manaisotra ny tifitra maina sy hazo rehetra, ary ny tahony tsirairay dia tokony hohafohezina mba hahafahan'ny "maso" roa fotsiny, izany hoe ireo matevina itomboan'ny rantsana vaovao, hita amin'ny tany.
Tsy lazaina intsony fa ilaina ny secateurs maranitra sy tsara hahatratrarana ny faritra azo notapahina indrindra. Raha tsy izany dia mety hipetraka eto ny bobongolo sy ny bibikely.
Amin'ny fahavaratra dia afaka mankafy ireo voninkazo saika tsy misy fameperana ianao. Raha ilaina dia azonao atao ny mamboly indray mandra-pahatongan'ny volana Jona ary mety manondraka azy indraindray, fa azafady aza apetraka amin'ny tolakandro sy avy any ambony! Rehefa tratry ny hazavan'ny masoandro, ny vongan-drano amin'ny voninkazo sy ny ravina dia mety hiteraka may mandoro eo amin'ilay zavamaniry.
Ary raha matahotra ny bibikely zavamaniry ianao dia mamboly lavender fotsiny eo akaiky eo: ny fofony dia tsy mandroaka afidia fotsiny, fa manome accents koa ny Mediteraneana.
Fehezam-boninkazo raozy olon-dehibe pejy fandokoana
Pejy fandokoana ho an'ny fo sy raozy ho an'ny olon-dehibe
Pejy fandefasana fitiavana | Ny fo sy ny raozy
Nipoitra ny modely fanamarihana